Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Avaratra » COVID-19 any Korea Avaratra: fanenjehana, fanidiana ny renivohitra, fandrarana ny jono
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Araka ny tatitra farany, ny jadona Koreana Tavaratra Kim Jong-un dia mandray fepetra henjana, toy ny fanidiana ny renivohitr'i Pyongyang sy ny fandraràna ny jono, mba hampitsaharana ny fiparitahan'ny Covid-19 amin'ny fanjakana hermitany.
Voalaza fa naka “fepetra tsy mitombina” i Kim tamin'ny ady paranoavirus, nandidy ny famonoana olona roa farafaharatsiny, fandrarana ny jono any an-dranomasina ary hanidy ny renivohitr'i Korea Avaratra, Pyongyang.
Raha ny filazan'ny masoivohon'ny mpitsikilo any Korea Atsimo dia nandrara ny fanjonoana sy famokarana sira ny Mpitarika Faratampony any Korea Avaratra noho ny tahotra sao voan'ny virus ny ranomasina.
Ity paranoia anti-virus mifandraika amin'ny ranomasina ity dia voalaza fa midika ihany koa fa vary 110,000 XNUMX taonina avy any Shina no tafahitsoka ao amin'ny seranan-tsambo avaratra atsinanan'i Dalian.
Fanidiana fanidiana maromaro any Avaratra, isan'izany ny renivohitra Pyongyang sy ireo faritra hafa nahitan'ny tompon'andraikitra entana sy vola vahiny tsy nahazoana alalana.
Ny iray tamin'ireo olona roa voalaza fa novonoina, mpivarotra vola be, dia voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fidinan'ny fifanakalozana. Ilay iray hafa, tompon'andraikitra ambony amin'ny fanjakana, dia novonoina tamin'ny volana Aogositra taorian'ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny governemanta izay mametra ny entana entina avy any ivelany.
Na eo aza ireo hetsika voalaza ireo dia mbola hanamafy ampahibemaso ny tranga COVID-19 i Pyongyang.
Ny porofo teo aloha dia nilaza fa tena nandray ny areti-mandringana i Kim, miaraka amin'ny fanidiana mafy ny sisintany ary ny famerana ny hetsika hatramin'ny volana Janoary.
Tamin'ny volana Oktobra, nampitandrina ny olom-pirenena ny fahitalavitra Koreana Tavaratra noho ny tahotra sao misy rahona “vovoka mavo”, izay miposaka avy any Chine, ahitana “fitaovana poizina, virus, ary microorganism pathogenic.” Voalaza fa foana ny araben'ny renivohitra taorian'ny fampitandremana.
Tamin'ny volana jolay, Kaesong, renivohitra manan-tantara ao Korea miray, dia nihidy noho ny raharaha COVID-19 ahiahiana taorian'ny niampitan'ny olona tsy ara-dalàna ny sisin-tany. Nesorina ny fanidiana rehefa afaka telo herinandro.
Nandrisika ny fanemorana ny fivoriamben'ny UNWTO. Nanamafy ny WTO! Novambra 27, 2021
Torolàlana CDC vaovao ho an'ny Amerikanina momba ny Omicron Covid Variant B.1.1.529 Novambra 27, 2021